11 သင်၏အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ရှောင်ရှားရန်အမှား ၁၁ ခု Martech Zone
အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏမျှဝေသည်၊ သို့သော်အလုပ်မလုပ်သောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ ကောင်းပြီ Citipost မေးလ် ခိုင်မာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုအတူတကွထား သင်၏အီးမေးလ်ကင်ပိန်းတွင်သင်မထည့်သင့်သောအရာ ၁၀ ခု သင်၏အီးမေးလ်များကိုရေးသားသောအခါသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင်ရှောင်ကြဉ်ရမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသည်။
သူတို့ကတကယ်တော့ 11 ထောက်ပံ့ပေး! ဒီစာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သဘောကျတာကအင်တာနက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူ (algorithms) နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမတတ်နိုင်လို့ပါ။ISP က) အသုံးပြုခြင်းနှင့်စာရင်းပေးသွင်းထားသူတုန့်ပြန်မှုသည်မည်သို့ဖြစ်မည်အကြောင်းပိုမိုသိရှိနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူ၏ရှုထောင့်မှသင်အီးမေးလ်တစ်ခုရေးဆွဲသောအခါထိုအရာအားလုံးသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
စကားများလွန်း… - သင်၏သုံးစွဲသူများကိုလွှမ်းမိုးထားခြင်းကသူတို့ကိုသင်၏အီးမေးမှပယ်ဖျက်ရန် ဦး တည်နိုင်သည်။ တိုတိုပြောရမယ်၊ ပစ်မှတ်ထားပါ၊ မလိုအပ်တဲ့စကားအသုံးအနှုန်းကိုမသုံးပါနဲ့။
Junk Folder ထဲမှာတွေ့ရမည့် Subject Line - သင်၏အီးမေးလ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတွင်သတိပေးချက်များကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်တိကျသောစကားလုံးများရှိသည်။ESP) ။ ဥပမာများပါဝင်သည် အခမဲ့, % offနှင့် သတိပေးချက်.
အားနည်းသောဆိုင်းအင် - Boomerang ၏လေ့လာမှုတစ်ခုအရကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြချက်ကပျမ်းမျှတုန့်ပြန်မှုနှုန်း ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့သည်
သင့်အကြောင်းများလွန်း - အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များကသင့်ကိုစိတ်မဝင်စားကြပါ၊ သူတို့အတွက်သင်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုစိတ်ဝင်စားကြသည်။
လှည့်စားဘာသာရပ်လိုင်းများ ယုံကြည်မှုသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာအားလုံးအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးကိုသင်၏ပွင့်လင်းမှုနှုန်းကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အန္တရာယ်မရှိစေရန်။
အဘယ်သူမျှမပြန်ကြားချက်ပေးပို့သူလိပ်စာ - စားသုံးသူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သင်၏အီးမေးလ်များကိုသူတို့တုံ့ပြန်နိုင်ကြောင်းသိလိုကြသည်။ ဘေးထွက်မှတ်စု ... ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ကြားချက်အီးမေးလ်လိပ်စာဖြစ်ပါတယ် စာမပြန် ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တကယ်တုန့်ပြန်လုပ်ပေး!
ရုပ်ပုံကြီးတစ်ခု preview text နဲ့ link တစ်ခုပါတဲ့ image မပါ ၀ င်ရင်သင် SPAM အဖြစ်သတင်းပို့ဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။
အဆက်ဖြတ်များ - အီးမေးလ်တစ်ခုဖွင့်ခြင်း၊ link ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။ ဘာမျှမဖြစ်နိူင်ပါ။ စာရင်းမယူရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်!
စာလုံးပေါင်း - ငါတို့ရှိသမျှသည်သူတို့ကိုလုပ်ပေမယ့်သင်ကယုံကြည်စိတ်ချကုန်ကျသည်။ စာရင်းသွင်းပါ Grammarly မင်းလုပ်လိုက်တာပျော်မယ်။
တန်ဖိုးမရှိပဲပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာ - အီးမေးလ်များကိုပို့ရန်အတွက်သာအီးမေးလ်များပေးပို့ခြင်းသည်သုံးစွဲသူအားဆုံးရှုံးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးပေးပြီးသူတို့သည်သင်၏နောက်အီးမေးလ်ကိုစောင့်မျှော်နေလိမ့်မည်။
လှုပ်ရှားရန်ခေါ်ဆိုမှုများလွန်းသည် - အမြဲတမ်းအီးမေး (လ်) ၏ရောင်းဝယ်မှုသည်သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူကိုတန်ဖိုးမထားပါ။ သင်၏စာရင်းပေးသွင်းသူများသင်ပြုလုပ်လိုသည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုတန်ဖိုးထားပြီးကန့်သတ်ပါ။
ဒီနေရာမှာ infographic အပြည့်ပါ။
Tags: အကြောင်းအရာစျေးကွက်ctaကျိုးပဲ့လင့်များအီးမေးလ်လုပ်ဆောင်ချက်အီးမေးလ်အီးမေးလ်အကြောင်းအရာအီးမေးလ် CTAsအီးမေးလ်ပုံရိပ်အီးမေးလ်လက်မှတ်ထိုးအီးမေးလ်အကြောင်းအရာလိုင်းအီးမေးလ်အီးမေးလ်တန်ဖိုးအီးမေးလ်စကားလုံးအရေအတွက်အီးမေးလ် wordcountပြန်ကြားချက်မရှိသောအီးမေးလ်လိပ်စာနှုတ်ကပတ်တရားတော်အရေအတွက်စကားလုံး
PHP နှင့် SQL: Haversine ဖော်မြူလာနှင့်လတ္တီတွဒ်နှင့်လောင်ဂျီတွဒ်အကြားရှိကြီးမားသောစက်ဝိုင်းအကွာအဝေးကိုတွက်ချက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေခြင်း